2 डे कार्यक्रम कार्यक्रम मे मेडेलिन कोलम्बिया | सडकको लागि एक युगल
सेप्टेम्बर 12, 2019 / एक टिप्पणी छोड
बीस वर्षअघि कोलम्बिया असफल राज्यशास्त्र र मेडेलिनको किनारमा टिटिङ गर्दै थिए, आडियन राष्ट्रको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो शहर एक नारु युद्ध क्षेत्र थियो। यो हिंसाले एक प्रतिष्ठा सिर्जना गरेको छ जसले लामो समयदेखि शहरको इतिहास, जीवंत संस्कृति र बिल्कुल आश्चर्यजनक परिदृश्यलाई परास्त पारेको छ। भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीहरू हिंसाको तल लुकेको लुगा पत्ता लगाउँछन्। यी रत्नहरू आगन्तुकहरू छोड्न कठिन छन् र फर्कन समेत गाह्रो हुन्छन्। मेडेलिन बिस्तारै छ तर निश्चित रूपमा यात्रीहरूको मन जित्ने।
त्यसोभए कोलम्बिया अण्डाको हृदयमा यो आकर्षक शहरमा यात्रीहरू के हो? हाम्रो 48 घन्टा मेडेलिन गाइड को डिजाइन गर्न को लागि डिजाइन गरिएको छ कि, तपाईं केहि भित्र सुझावहरु दिदै गर्दा सबै भन्दा राम्रो को शहर को अनन्त स्प्रिंग कसरि प्रस्ताव को छ।
Rionegro देखि El Poblado
यो भाग साँच्चै यात्रा कार्यक्रममा एक विकल्प होइन, तर यसलाई छोडेर यस लेखबाट बाहिर निस्किने हुनेछ। मेडेलिनको मुख्य हवाईअड्डा शहरको एक घण्टा पूर्वी क्षेत्र रियियोगोरो भनिन्छ। सामान दावी पछि स्यान डिएगोको नेतृत्वमा बसको खोजी खोज। हामी ट्याक्सिस छोडेर सल्लाह दिन्छौं किनकि तिनीहरू धेरै महँगो हुन्छन्। एक पल्ट बस टाउको बाहिर एक पल्ट मेडेलिन को बाहिर ग्रामीण इलाकों को माध्यम ले पहिले घुमावदार यात्रा मा खोजेगा, र फेरि सुंदर सडकों मा शहर मा उतर। मूल को साथ दृश्य साँस लेने वाला छ ताकि तपाईंको क्यामेरा को तैयार गर्न को लागी सुनिश्चित हो। एक सूर्यको उत्पत्ति अझ बढी विशेष छ। पहिलो स्टपमा हॉप र तपाईंको होटल वा अपार्टमेन्टमा ट्याक्सी लिनुहोस्।
अब हामीले ड्राइभमा राखेका छौं, चलेको तपाईंको तालिकामा पुगौं।
9: 00 म नाच हान्नुहोस् र मन पराउँछु
मेडेलिनमा नास्ता ठाउँहरू सजिलो छ र मेनु सरल सजिलो हुन्छ। हामी सडकलाई मारेर सुझाव दिन्छौं र कुनै सानो कुना रेस्टुरेन्ट बिक्री गर्दछौं huevos y calentado। यो खरगोश अण्डा र चावल र सेम मिश्रण छ जुन तपाईंलाई केही ठोस ऊर्जा दिन दिनहुँ अन्त हुनेछ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले केहि फलोंको रस पनि पाउनुहुन्छ। यो फल रस होइन जस्तो तपाईं यूएस वा यूरोपमा भेट्टाउनुहुनेछ। यो अधिक सुचारु प्रकारको बनावट हो र यो सबै स्वादिष्ट छ। रसलाई अर्डर गर्नुहोस् "en agua " को रूप मा "en leche ".
10: 00 एम मेट्रो र Metrocable Parque Arví
मेडेलिनको मेट्रो सार्वजनिक यातायात भन्दा धेरै छ। यो शहरको परिभाषित प्रतीकहरू र धेरै नागरिकहरूको लागि गर्व को एक मजबूत स्रोत हो (केवल उनलाई सोध्नुहोस् किन मेडेलिन बोगोटा भन्दा राम्रो छ र यो एक मेट्रो प्रणालीको बोगोटाको कमी हुनेछ। Poblado स्टेशन मा मेट्रो पकडें र उत्तर दिशा तिर Niquia। एसेभोमा जानुहोस् र लक्षणहरू पालन गर्नुहोस्। पहिलो लाइनले तपाईंलाई सान्टो डोमिंगोमा लिनेछ जहाँ तपाईं डेबोर्ड गर्नुहुनेछ र माध्यमिक रेखालाई पुरा तरिकाले Arví मा लैजानुहोस्। धमनीले आफ्ना यात्रीहरूलाई अविश्वसनीय दृश्य प्रदान गर्दछ किनभने यो पर्वत रेंजलाई शहरमा पार गर्दछ। तपाईं चढेर केहि थोरै इलाकाहरूको पक्षीको आँखा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईंको क्यामेरा तयार छ।
सुझावयात्रा को शुरुवात मा टिकट बूथ मा जाएँ र तपाईंलाई बताइए कि तपाईं Arví मा जान्छ। तिनीहरूले तपाईंलाई पर्याप्त रकमको साथ कार्ड दिनेछन्। प्रत्येक स्थानमा कार्ड स्वाइप गर्नुहोस् र टिकट रेखा छोड्नुहोस्।
11: 15 मा एक पथ र वृद्धि को चयन गर्नुहोस Arví
पार्क आफै ठूलो छ, पैदल ट्रेल्सको लगभग 60 वर्ग माइल र 54 माइल को कवर गर्दछ। तपाईं एक पुरातात्विक मार्ग छान्नुहोस् र पार्कको मुख्य ताल वरपर आकर्षक चट्टानको ढाँचा वा वृद्धि ट्रेलहरू जाँच गर्न सक्नुहुनेछ। वन्यजीवनको लागि आफ्नो आँखा खोल्नुहोस् र शहर माथि माथि ताजा हावाको आनन्द लिनुहोस्।
2: 00 मा पार्क मा एक साधारण लंच लिनुहोस्
तपाईले पार्कमा धेरै विकल्पहरू छन् जब लञ्चको वरिपरि घुमाउँदछ। ताल द्वारा तल हामी ट्राउट, सलाद, र चावल को सिफारिश गर्दछौं। मार्केटमा (दाँया पुर्याउने अर्को पछि), हामी ताजा बनाइदिन्छौं pasteles de pollo (चिकन-भरिएको पेस्ट्री) र केहि फल। बजारबाट टाढा केहि ठेठ खाना खाने स्थानहरू छन् जुन सेवाको लागि sancocho, bandeja paisa र अन्य प्लेटहरू जुन स्थानीयहरूले माया गर्छन्। त्यसोभए तपाईंको पछाडि उत्रो र पर्वतमा पछाडि फर्केर अघि पछाडि खुट्टा राख्नुभयो।
3: 30 मा ला कासा डे मेमोरीमा एक इतिहास पाठ प्राप्त गर्नुहोस्
ड्युनिटी द्वारा फोटो
मेट्रो ले ला एस्ट्रेला तिर दक्षिण र पाकेर Berrio स्टेशन मा बन्द। त्यहाँबाट तपाईं हिड्न सक्नुहुन्छ (दिशा निर्देशनहरू यहाँ) वा संग्रहालयमा एक टैक्सी लिन्छ। ला कासा डे मेमोरी एक संग्रहालय र इतिहास को समर्पित एक स्मारक हो र कोलंबिया को हिंसक संघर्ष को शिकारहरु। मेडेलिनमा आउन र हिंसाको इतिहासमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने शहरलाई प्रस्ताव गर्ने थुप्रै उत्तम चीजहरू सम्झन सक्दछ, तर बेवास्ता गर्न यो पनि समान रूपमा गल्ती गल्ती हुनेछ। आफैलाई सिकाउनुहोस् र मेडेलिनमा र देशमा आफैं परिवर्तन भएका स्थानहरूको लागि एक महसुस प्राप्त गर्नुहोस् (र अझै पनि लिइन्छ)।
5: 00 बजे तपाईंको अपार्टमेंटमा फर्केर र रातको लागि आराम गर्नुहोस्
मेडेलिन यसको टोपोग्राफीमा अद्वितीय छ। घाटीमा रहेको एक सहरमा केन्द्रित शहरको वरिपरि पर्वतमा पर्वत पर्वतमा चढाइन्छ। हाम्रो लागि, यो सबै बारेमा है। यस कुरामा दिमागमा, हामीले एक छान्नुभयो Poblado पडोसमा सुन्दर पेंट हाउस कुनै पनि व्यक्ति द्वारा डिजाइन गरेको छ जसले हामीलाई सोच्दछ। लिङ्ग कोठामा विन्डो छतमा फर्शलाई तपाईले एक दृश्य दिनुहुन्छ जुन तुरुन्तै बिर्सनु हुँदैन।
कहिलेकाहीँ एल पाबोलोडो पर्यटक जाल बन्न पुग्यो, तर यो अपार्टमेन्ट सहरको दक्षिणी भागमा अवस्थित छ जहाँ तपाइँ पर्यटक भीडबाट डराउनु हुँदैन। तपाईं मेट्रो र रातो जीवनको लागि उत्तम खण्डबाट एक छिटो टैक्सी सवारीको एक मात्र ब्लक हुनुहुन्छ।
7: 30 बजे डिनर ला Aboretteria मा
एल् पबोलाडो प्रोवेन्जा सेक्शन सम्म उत्तर द्रुत टैक्सी सवारी उत्तर लिनुहोस्। यो हाम्रो मनपर्ने खाना र सम्पूर्ण शहरको रात्रि जीवनको क्षेत्र हो र हाम्रो लागि यो शहरमा तपाईंको पहिलो रातको लागि नो-ब्यानरर हो। La Abarroteria हामी शहरमा सबैभन्दा राम्रो पेट्रो बर्गर हुने विश्वास गर्छौं। घर फ्रिज संग सेब र नीलो पनीर बर्गरको लागि जानुहोस्। यदि तपाईं बर्गर र फ्रिजको लागि माथि हुनुहुन्न भने, मेडिकल स्टिक फिललेट पनि घरको बारेमा लेख्न योग्य छन्।
9: 00 बजे लिफ्ट ईर्ष्या सम्म
क्लबलाई हिट तुरुन्तै छ, तर तपाईं रात सुरू गर्न तयार हुनुहुन्छ। ईर्ष्यासँग एक ठुलो भित्ता र उत्कृष्ट ककटेल मेनु छ। तपाईंको समूहको साथ रातलाई योजना बनाउनुहोस् र दिनको रोमांचमा प्रतिबिम्बित गर्नुहोस्। रातमा मेडेलिनको छतपाईंको दृश्य लुकाउने छ।
11: 00 बजे 15 Minutos डे फ्यामा dance dance
दुई तह तालिकाहरू र डान्सफ्लोरहरू, धेरै विदेशीहरू छैनन्, र पूर्ण पट्टीले 15 लाई राम्रो ढोका पाउनको लागि राम्रो विकल्प बनाउँछ। त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ।
9: 00 रस र पेसा नाश्ताको साथ अन्तिम रात बन्द
हामी अर्को स्थानीय रेस्टुरेन्ट खोज्दै र रस, अण्डा, चावल र सेमको लागि जाँदैछौं। यो थकान र / या रात देखि पहिले hangover को लागि उत्कृष्ट छ।
नेक वान सोना द्वारा फोटो
10: 00 ले ग्याटप्याटमा बस आउट आउट गर्नुहोस्
देखि उत्तर बस टर्मिनल ग्वाटेप (ला पेइडिरा / एल पेनाल) को नेतृत्व मा एक बस पकडें र मेडेलिन ग्रामीण इलाकों मार्फत सवारी को आनंद लें। यो यात्रा सामान्यतया दुई घण्टाभन्दा कम छ, त्यसैले केही ज्योको स्ट्याक गर्न निःशुल्क महसुस हुन्छ भने तपाईले आज रातको पर्याप्त सुत्न पाउनुभएन।
12: 00 बजे चट्टान चढेर
ग्वाटेपैपि मेडेलिनको पूर्वमा एक सानो शहर हो, तर मुख्य आकर्षण केवल मुख्य शहर बाहिर रहेको ठूलो चट्टान हो। एक खुकुलो 740 सीढ़ीहरूले तपाईंलाई शीर्षमा लैजान्छ र तपाईंलाई कोलम्बियामा सबै भन्दा उत्तम हेराइहरू दिन्छन्। खराबी वृद्धिको सम्भावनाले तपाईंलाई सानो पसीना तोक्न सक्छ त्यसैले वंश बनाउनु अघि केहि समयको लागि माथिल्लो हावा माथि तातो गरौं।
1: 15 बजे शहरमा ट्राउट
चट्टानको मार्गमा आफ्नो घुँडा घुम्न थालेपछि, मिनी ट्याक्सिसको एक हप र ग्वाटेपको वास्तविक शहरमा हेड। पानी संग, तपाईं स्थानीय ट्राउट फार्महरु बाट ताजा ट्राउट सेवा गर्ने ठेठ रेस्टुरेन्टहरू धेरै फेला पार्नुहुनेछ। तपाईं केहि हड्डियों बाहिर निकाल्नु पर्छ, तर यस प्रयास को राम्रो तरिकाले लायक।
2: 15 बजे जेट स्केयर र इन्टरनेट जडान गरिएको पत्ता लगाउनुहोस्
जेट स्के पानीको किनारामा उपलब्ध छन् र प्रायः 30 वा 45 मिनेट भाँडामा छन्। बैंकिङमा जडित पोखरीहरू र आधुनिक छुट्टी घरहरू अन्वेषण गर्नुहोस्।
3: 00 बजे सम्म तपाईंको बस हेड आउट नभएसम्म सडकहरू अन्वेषण गर्नुहोस्
गाउटेप एक पटक रन-डाउन भएको थियो pueblo कि कम से कम मेडेलिन निवासियों को ध्यान पकडे, धेरै कम विदेशीहरु। तथापि, मेडेलिनको रूपमा लोकप्रियता बढेको छ, यस शहरले केही परिवर्तन भएको छ, यसको घर इन्द्रेणीको हर रंग र चित्रित भित्ता को एक प्रकार संग सजावट गरेको छ - एक संयोजन जसले शहरलाई एकदम सानो चरित्र दिएको छ ।
जर्ज डोनेली द्वारा फोटो
4: 30 बजे सवारी फिर्ता लिनुहोस् र तपाईंको क्यामेरा तयार छ
दिउँसो-दोपहर / साँझको प्रकाश र संयोजन मार्गको दृश्यले निश्चित रूपमा तपाईँलाई स्नैपिंग गर्नेछ। 4: 30 बस तपाईं सूर्य सेटको रूपमा शहर पुग्नुहुनेछ। घाटीमा भित्री अर्कोअर्कामा छ।
7: 30 Desus ले यीशु Mio तपाईंलाई बाहिर निकाल्न
Dulce यीशु Mio आफैलाई एउटा लेख चाहिन्छ। यो कोलम्बियाले कल बोकेको छ fonda - एक रेस्टुरेन्ट / बार / कोलम्बियामा पारंपरिक जलविद्युत छेद द्वारा प्रेरित सामान्य पार्टी स्थान pueblos। हेलोवीन, क्रिसमस र सर्कससँग मिलाएको एक सैलूनको बारेमा सोच्नुहोस्। सबै रंगहरु, सुपर हीरो विषयवस्तुहरु को लाइट्स, र मूवी पात्रहरु र जनावरहरु को प्रतिमाहरु तपाईंलाई प्रवेश र अंदर को बधाई छ कि तपाईं पनि अधिक trippy सजावट संग लग रहेको छ कि बिल्कुल ठाँउ देखि बाहिर लग रहेको छ। आफ्नो खाना Aguardiente को बोतल (स्थानीय मेला अल्कोहल छनौट) को साथ आदेश दिनुहोस्, फिर्ता लिनुहोस् र शोहरू हेर्नुहोस्। यो जंगली रात्रि हुनेछ।
मेडेलिनमा सबै आवास विकल्पहरू हेर्न, हाम्रो जाँच गर्नुहोस् आवास खोजी इन्जिन।
* यदि तपाईँले बोगटामा समय खर्च गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने कसरी पत्ता लगाउन यो मार्गदर्शक जाँच गर्नुहोस् बोगोटा मा महान हस्टल!
द्वारा आवरण फोटो इवान एर्रा योटा.
श्रेणी: कोलम्बिया, यात्रा कार्यक्रम, दक्षिण अमेरिका, यात्रा योजना टैग: अनन्त वसन्त शहर, कोलम्बिया, कोलम्बियाई अनुहार, desayuno, el poblado, ग्याटप्याप, la aboretteria, मेडेलिन, दक्षिण अमेरिका
← पब र जैक को मार्गमा जानुहोस् लिपर लन्डनमा
देश नाश्ता Casserole →